आमाद्वारा १ वर्षीया छोरीको हत्या « Janata Samachar
आमाद्वारा १ वर्षीया छोरीको हत्या
रुपन्देही । जिल्लामा आमाले छोरीको हत्या गरेकी छिन् । मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर-३ मा २१ वर्षीया प्रेमा यादवले एक वर्षीय छोरीको हत्या गरेकी हुन् । छोरीको हत्यापछि आफूले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आइतबार राति एक बालिकाको शंकास्पद मृत्यु भएको र आफन्तले खोलामा शव गाडेको भन्ने खबर पाए लगत्तै प्रहरी सो क्षेत्रमा गएको थियो । दानव खोला नजिक शंकास्पद ठाउँमा खनेर हेर्दा बालिकाको शव गाडेको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले बताएको छ।
घाँटीमा शंकास्पद दाग देखा परेपछि शव पोष्टमार्टमको लागि भैरहवा भिम अस्पताल पठाइएको थियो। छोरीको हत्यापछि उनले घरमै आत्महत्याको प्रयास गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रेमाकी नन्दले आत्महत्या गर्न खोजेको देखेपछि डोरी काटेर बचाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ ।
घटनामा रुपन्देही मायादेवी ३ हरहरवाकी मृतककी आमा प्रेमा यादव, ससुरा बुद्धिराम यादव, सासु राजमती यादव, श्रीमान् राजकुमार यादव र प्रेमाको साथी भनिएका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका ९ का प्रदिप चौधरी प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।
दुई लाख घुससहित अधिकृत पक्राउ
मोरङ । नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरमा कार्यरत एक अधिकृत घुससहित पक्राउ परेका छन् ।
शुक्रवारकाे माैसम पूर्वानुमान : एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना
विनयजंग बस्नेतविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा
काठमाडौं । विनयजंग बस्नेतविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सपना रोका
पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान निर्माणमा समान रुपले सम्बोधन नभएको
शुक्रवारकाे माैसम पूर्वानुमान : एक–दुई स्थानमा…
२०७७ फागुन १४ गते शुक्रवारकाे राशिफल
व्यक्तिगत काममा अलमल हुनेछ । साथीभाइसित रमाइलो यात्रा हुनेछ । पारिवारिक काम बन्नेछ ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान निर्माणमा समान रुपले सम्बोधन नभएको बताउनुभएको छ ।
सम्पदा वस्ती जाेडेर ‘पर्यटकीय प्राेडक्ट’ विकास…
पर्यटकीय सम्पदा वस्ती वुङमतीलाई साइकल रुट बनाउने, वुङमतीको काष्ठकला र हस्तकलालाई विश्वव्यापीरुपमा चिनाउन र सम्पदा बस्ती संरक्षणमा स्थानीय सरकारसँगै परियोजना…
हेमबहादुर मल्ल सम्मान डा. दासलाई प्रदान
अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालीहरुको पहिचान निर्माण गर्ने उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. गौरी शंकर लाल दासलाई प्रदान गरिएको…
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, पीडितको ३ करोड डुब्यो
विश्वभर ८ करोड ९१ लाख संक्रमणमुक्त, २५ लाख १७ हजारको मृत्यु